Akakwana Hasha dzaMwari — Trip LEE
Akakwana Hasha dzaMwari
Ndinoda kutanga nokuverenga mamwe prices. Saka chete nyatsoteerera uye kufunga kana kwete unobvumirana chii akati.
"Hasha anogara chete pachipfuva chamapenzi." - Albert Einstein
"Hasha ndiko kupenga pfupi." - Horace
"Zvose zvatanga nokutsamwa kunoguma nokunyadziswa." - Benjamin Franklin
"Usambofa chinhu [kutsamwa], nokuti muchaita zvose zvakaipa. " - kupfupisa
Hasha avo asiri mumwe hunhu husina isu kazhinji tinoda. Hapana munhu anoda hasha. Hasha kunotungamirira inovava uye vakabata zvigumbu. Hasha kunotungamirira zvisarudzo zvakaipa. Hasha dzimwe nguva kunyange kuchisimba. Vanhu kazhinji handidi kuva kumativi munhu dzibhururuke kure mubato chero nguva. Kunenge zvishoma sagadzikana.
Asi pano mubvunzo wangu: Mwari tigumbuke? Pane kuti anogona kuti Mwari wezvose dzokubikira ibenzi? Zvakanaka Ndinofunga wenyaya yedu manheru ichi ichapindura mubvunzo.
Haufaniri kutsausa neni. In Exodus 17, vaIsraeri kuedza Mwari nokuita sokunge vasingagoni vanomutenda. Mushure zvose zvaAkaita kwavari, akavayera vanhu vake, achivanunura kubva muuranda, uchivatarisira uye zvichingodaro, vachiri regai vanomutenda. Saka ivo vakarwa naMosesi uye kumuudza kuti kuvapa mvura ikozvino. Ivo vanomubvunza nei yaakavabudisa mugwenga kufa. Uye chaizvoizvo bvunza mubvunzo, "Ko Jehovha ari pakati pedu here kana kuti kwete?"
Uye ichi ndicho pamusoro kunyunyuta uye anokumhan'arira Mwari mhando kuti kuitwa chizvarwa ichi. Fast mberi kune Numbers 14, zvakare, vanenge sezvinoita yokudzokorora. wakaputsika zvinyorwa, vari kamwe zvakare vachinyunyuta uye vachiti zvingava nani kuva shure muIjipiti. Havana kuvimba Mwari kuti avanunure uye kuchengeta zvipikirwa Zvake.
Pisarema Izvi kunoyeuchidza zvose zvikuru nyaya idzodzo. Uye ndima yedu tiratidzei Mwari apindura kushaya chivimbo maari.
Dzokerai neni nePisarema 95:10-11.
Kwemakore makumi mana Ndakatsamwira Chizvarwa; ndati, "Ivo vanhu vane mwoyo kuchitsauka,uye havana kuziva nzira dzangu. "Naizvozvo ndakapika mhiko mukutsamwa kwangu, "Havazopindi pazororo rangu."
Tiri kuenda funga pfungwa nhatu pfupi kubva murugwaro urwu manheru ichi.
ini. Chivi chinokurwadzai Anger raMwari
Teerera zvakare rugwaro. Mwari anoti, "Kwemakore makumi mana Ndakatsamwira Chizvarwa…" Zvakanaka Ndinofunga kuti inopindura mubvunzo zvakajeka vakanaka. Mwari anoita tigumbuke. Uye zvivi zvavanhu vake kuti chinokurwadzai hasha ichi. Asi handifungi panofanira kuva chero kushamisika pano kuti chivi chavo akaita akatsamwa Mwari. Uyu ndiwo sei Mwari anopindura kutadza.
Kukura Ndaiva baba vakanaka, akanga rudo uye ndinzwe uye takava ukama yakanaka. Asi handina kumbobvira ainyatsoziva chii kumunetsawo achizogamuchidzwa kuva. Saka kuti mbudzana vaida kuwana zvinhu uye nzvimbo, Ini rudzi ndaiita ndaifanira kutamba mutambo. Ndisati akamukumbira chinhu, Ini vorudzii akaedza kunzwa naye kunze uye toona Kwemanzwiro mhando akanga ari. "Sei Kumbonetswa vaparidzi vasina hanya vanobva iwayo, baba? kugerwa Your chokwadi anotaridzika zvakanaka. "Uye vaya mibvunzo feeler aizondibatsira edza ndinofanira kukumbira kana iye zvino kana kuti gare gare. Asi nzira dzangu havana vakakwana. Saka kana ndakamubvunza ndaisazombogona kunyatsoziva kana vaizobvuma nomufaro ("Chokwadi, mwanakomana!") kana hasha ("Simuka outta chiso changu, mwanakomana!"). Aiva vasingagoni kuvimbwa navo saizvozvo.
Zvakanaka hatifaniri kutarisira pamusoro unpredictability muna Mwari mhando iyi. Mwari anoshanda zvinoshamisa. Saka Mwari ndiye vasingagoni kuvimbwa navo munzira dzakawanda, asi hapana vasingagoni kuvimbwa navo pamusoro achipindura rake chivi. It chinokurwadzai hasha dzake. Akavimbisa Adhamu naEvha, vaizofa kana vaisazoteerera naye. Pamusana pechivi Akavhura pasi uye rakadonha vanhu kuburikidza nawo muSheori Numbers 15. Zvino zvakaitika akataura muPisarema ichi, Mwari kamwe zvakare anopindura nehasha. Chivi chinokurwadzai hasha dzaMwari.
chokwadi, okuti iri rakashandurwa Ndakatsamwira rudzi kuti, zvikuru rinoreva "Ini kusema kuti chizvarwa." Ndizvo zvakaitwa shanduro dzakawanda dzinoti. It anotaura ichi mufananidzo kusemeswa. Mwari ari kusemeswa vanhu ava nokuda sei vangobvumira vanozvibata. Saka kupindura mubvunzo wedu, Mwari anoita kuwana akatsamwa uye Akapindura chivi yapfuura chizvarwa ane hasha, mutsvene, kusembura.
Ikozvino ndinoziva ichi ngango, inotapukira kuzorwa vamwe vanhu yokuti Mwari. vanofunga, "Zvakanaka kuti haasi Mwari wangu uri kutaura pamusoro. Mwari wangu haasi tigumbuke. Mwari wangu aisazombofa kuti. "Zvakanaka iwe uve akarurama. Zvimwe Mwari wenyu haana kutaura kuti, asi Mwari weBhaibheri chete akaita pano murugwaro urwu.
Saka pane dambudziko pano? Sei aigona zvakakwana, Mwari mutsvene anoramba kupindura pamwe nehasha nokutsamwa uye kunyange ndinosemeswa? Kana ini nguva vakabvuma mudzimai wangu hasha uye achinditi wake, kuti aizova rakaipisisa chivi changu chikamu. KwaMwari hasha, Zvisinei, haana chivi akafanana needu. Haisi tsika chinanga.
Sezvo ini kuparidza ichi, Handisi kudiwa mari yokutenda chigunwe kumativi kana ruregerero nokuda kwaMwari hasha. Uye haufaniri kunzwa kudiwa ruregerero dzako neshamwari dzisiri dzechiKristu pamusoro kwaMwari hasha kana. Kana pamusoro Hell. Uye haufaniri kuva Unganyara kwake mutongo muTesitamende yekare akaita vamwe chakavanzika nezvaMwari vanotadza kare rakanga leaked.
Kutsamwa kwaMwari hausi chivi. Ndiyo nzira Mwari mutsvene anopindura kutadza. Ndiyo mutsvene chete mhinduro yepasi pose nokupandukira nokumukira nevanhu vakasikwa nomufananidzo Wake. Havaedzi zvienderane Mwari mitemo yenyu, nekuti ndiye chiero. hasha Our chivi, nekuti tiri vatadzi. Asi Mwari ave Mwari zvakakwana mutsvene unogona chete achatsamwireiko nenzira yakarurama.
Chivi ndicho chete chinhu hunotomugumbura. Mwari. Uye nguva dzose hunotomugumbura. Mwari. Uye mutadzi mumwe vachafanira kupindura kuna Mwari ane hasha, kana zvimwe kutsamwa kwaMwari nechinangwa navo kunogona kutorwa kutarisirwa.
kunyoresa: Dzimwe nguva tinotadza, tava kuedzwa kufunga hazvina kuti zvakaipa. Ndinoziva ndisati muKristu, uye kunyange dzimwe nguva pashure, Handina kufunga chivi sechinhu hombe. Asi nokuti zvose Ndakafunga nezvazvo yakanga kuti ndakanga nokuputsa mimwe mitemo. Handina kuva tsika zvakakwana. Zvakanaka chivi kunopfuura chete kukundikana kuva mutsika zvakakwana. Inguva mhosva pamusoro munhu - zvikuru akatendeka munhu. Uye shungu kuti munhu uye anoita vakamutsa kutsamwa. Mwari anovenga chivi.
Pamwe izvozvo zvisingagutsi imi kunyange. Zvichida unofunga Mwari ari kunyanyisa. Ini kunorevei chaizvoizvo Akanga atsamwa kwamakore makumi mana? Ruzha rwakaita Ari nepfundepfunde. Ruzha yokusawirirana kuduku mhando, Mwari. Nei kumuita anopenga saka? Zvakanaka kuti zvinounza kwandiri kunongedzera maviri.
II. Chivi Ko An Alternate Path
Tarisai ndima 10 zvakare. Mwari anopa tsanangudzo chizvarwa ichi Akanga akatsamwira. Anoti, "Ivo vanhu vane mwoyo kuchitsauka, uye havana kuziva nzira dzangu. "
Mwari anoti vachitsauka yavo. Havaiti chete havarasiki externally nezviito zvavo. Asi avo mukati, panguva chinoumba ndivanaani, Vanotsauka.
Ini kunge chaityisa - ndinoreva zvachose yakaipa - pamwe mirayiridzo. Saka zvichida chikonzero pavhiki mudzimai wangu tuma kumwewo kuti kuwana chimwe chinhu kana kushayiwa chinhu kure uye kana ini ndikasafananidza pasina kudana kwake kana zvinotora ini kashanu sezvo refu. Uye hazvisi nokuti kwaari mirayiridzo vakanga vakaipa, imhaka yokuti ndaita zvakaipa majana uende isiri nzira uye kuti atendeuka.
Eya uyu ari mufananidzo iri kupendwa pano mhando apo anoti mwoyo yavo kuchitsauka. Mwoyo yavo kufamba pasi munzira zvakaipa uye kuvatungamirira kuna isiri nzvimbo. Vari akarasika. Uye zvakafanana zvinogona kutaurwa chivi zvose. chivi zvose zviri kungogumira zvekunze, zvinoitika nokuti mwoyo yedu kuenda isiri mirayiridzo. Uye zvatinoita kutevera.
Uye Anotiwo, "Ivo havana kuziva nzira dzangu." hunhu hwaMwari akanga ari zvizere kuratidzwa pamberi pavo - tsitsi dzake uye simba rake, nezvimwewo. Uye Akavapa anoraira kutevera nzira dzake, kutevera nzira Dzake. Asi pachinzvimbo vakasarudza kutevera mumwe nzira. Ari uyo akavanunura kubva Farao uye akakamura Gungwa Dzvuku! Zviri sezvisingadaviriki kuti varege kuvimba naye pashure pokuona kuti. Vakaona mabasa ake, asi havana kuziva nzira dzake.
mukristu, ndiwe unoziva kuti izvi ndizvo zvauri kuita here kana ukatadza? Kuti hausi chete kudonha bhiza kana kuuya pfupi zvako zvakawanda? Uri kusarudza imwe nzira kune Mwari yaanoratidza imi. Uri achiti, "Mwari, Ndakaona nzira dzenyu uye handidi navo. Ndiri kuziva sei uchida ini kurarama, uye ndinofunga nzira yangu zviri nani. Ini ndiri akachenjera kupfuura iwe naIshe nani kupfuura iwe. Ndava kusarudza nzira yangu. "Izvi akaipa. Uye izvi ndizvo zvatinoita nguva dzose tinotadza. chivi chedu hapana nani pane chivi kugunun'una ichi, ndisingakahadziki, Zera rakaipa kubva murugwaro urwu.
Tinofanira kufunga zvakakodzera wezvivi zvedu, kana isu hatingazvirumbidzi kuvenga saizvozvo isu tinofanira. Ita chero Zvinoda kuona chivi chenyu zvakarurama. Hazvina shata. Havaedzi kuti runako. Tinogona kuda kunyange kuchinja nzira yatinotaura nezvazvo. Hatifaniri chete kufunga chivi yedu "Oh, Ndakarasikirwa hondo. kana o, Ndiri kunetseka neizvi. "No isu kusateerera Mwari. Isu akasarudza kuita chimwe chinhu kunze zvakarayirwa naMwari tiite, nekuti hatidi chii Anofanira kutaura. Ndizvo yakanyangara chokwadi yechivi. Uye kunyange sezvo vatendi vanoda kuita kuda kwaMwari, tava kurwa kuti kuramba uine maonero akanaka pamusoro chivi chedu.
Ralph Venning anotibatsira pasi omumisa Kutadza Sin paanoti, "Muchidimbu, chivi ndiko wakatsunga kururamisira kwaMwari, kubatwa chibharo ngoni dzake, ari kumunyomba wokushivirira ake, ari zvishomanana simba rake, kuzvidza rudo rwake. Tinogona kuenda uye kutaura, ndicho kutuka pamusoro kuchenjera ake, ari vanotoseka chipikirwa chake, kuzvidzwa uchenjeri hwake. "
Nyevero weMapisarema anopa pano kunotanga nemashoko, "Musaomesa mwoyo yenyu." Chaizvoizvo rinoreva musava kuwedzera akasindimara uye vanoramba mirayiro yaMwari. Uye kuti yambiro inoshanda kwatiri pamwe. Ndokusaka munyori wevaHebheru otora chikamu chino uye rinonyevera VaHebheru pamusoro wotishandukira.
Paunenge kuomesa vanoramba mirayiro yaMwari, iwe mwoyo anowana zvakaoma pamusoro nguva. Chaizvoizvo dzakaoma mwoyo zvinowanzoitika pamusoro refu zvaiva nguva, kwete nokukurumidza. Tinofunga kuzova rudzi munhu anoguma chivi vasingapfidzi, asi zvataigona. Chaizvoizvo dzakaoma mwoyo zviitike pamusoro nguva patinosarudza kuteerera Mwari panzvimbo duku zvinhu pamusoro uye kakawanda. A kungotarisa pano, duku nhema ipapo, uye pamusoro nguva tinova chakagomadzwa hwechivi uye kutanga kuzviruramisa naro. Uye usati here, tiri achingonyepera, kusvikira isu kuneta mukunyepera uye yokutevera Jesu zvachose. hondo duku idzodzo hadzisi rakakura.
Saka kana uri pano nhasi uye kubvumira vamwe chivi kuramba muupenyu hwako, kupfidza! ikozvino! Kureurura chivi chako kune vamwe. Musatanga kutenderera iyi anoomesa mwoyo wako. Pane kuvimba nzira dzenyu, kuziva kwake. Kutevera nzira dzake. Kuvimba Jesu uye kutenda Shoko Rake. Anokuda uye akupa nokuda kwenyu zvakanaka. Teverai nzira yake.
OK, saka kutsamwa kwaMwari atsamwiswa nechivi uye chivi chiri kusarudza nzira humwewo. Saka manje? Chii mhedzisiro kusarudza nzira iyi humwewo?
III. Chivi akatichengeta kubva raMwari zororo
Teerera nendima 11.
Saka ndakapika pakutsamwa kwangu, "Havazopindi pazororo rangu."
Migumisiro muri kuti Mwari hasha, Acharanga navo. In chiitiko ichi, Mwari anoregerera pavo, asi haana kuvatendera kupinda muNyika Yakapikirwa. Asi pakazosvika nguva weMapisarema anonyora ichi, vanhu vaMwari watova. Saka anoshandisa chinyorwa ichi kutaura pamusoro raMwari husingaperi zororo. Uye ichi ndicho sei munyori VaHebheru anorishandisa zvakare. Mwari ane zororo husingaperi kuti tinogona kupinda, asi chivi chedu kunogona kutitadzisa payo.
Tinoona pano kuti kwete chete anoita Mwari tigumbuke, asi iye anoita zvisarudzo pakutsamwa kwake. chokwadi, mundima ino Anoita mhiko pakutsamwa kwake. Anoita chaizvo mumwe kwokutanga prices anoti kwete kuita. Asi kutsamwa kwake hakuna chinji akafanana needu. Izvi hazvirevi kuti kutsamwa kwose chivi. Asi yake HAKUNA ndiko. Hasha haasi intoxicate naye uye kwakamuita kuti tisarudze mapenzi. pachinzvimbo, hasha dzake ari pamwero rinotungamirirwa, mutsvene, uye Achiri anonzwira nokunaka uye nokururamisira.
zororo raMwari husingaperi ndiyo yakanaka, rugare, non-anoshungurudza, Mwari achirumbidza nzvimbo vose rake vanhu vechokwadi achapedzisira. kutsamwa kwaMwari ndiye mutsvene, chete, ipa, chinotyisa mugumo vaya vawane zvakavafanira [reword]. Hapana zororo Muhero. Hapana chingapedza Muhero, chete kutambura uye hasha. Uye hatisi kutaura pamusoro kutsamwa kwehondo kana munhu, asi kutsamwa kwaMwari wemasimba ose ari musoro wako nokusingagumi. kutsamwa kwaMwari haasi chete zviripo Old Testament. Achiri kuvenga chivi nhasi. Tinofanira kutya Mwari uyu zvinoshamisa. chivi chavo akavadzivisa raMwari zororo, uye needu unogonawo kuakunda.
Uyu munhu wose ari muno manheru ichi. Mushure kufa, iwe uchava kana pazororo raMwari kana kutsungirira hasha dzaMwari. Avo ndivo chete maviri zvokusarudza. Tose kukodzera kusarudza wechipiri. Nokuti tose vakafanana rudzi runotadza anotaura nezve. Tinoenda nzira yedu. Isu rirasike yedu uye hatidi kutevera nzira Dzake. Isu maita chinhu kuti hunotomugumbura. Mwari pamusoro uye kakawanda.
Saka pane tariro ipi neipi wedu? Pane.
mu 1 VaTesaronika 1:10, Paul anotsanangura munhu muGarirea nemashoko aya, "Mwanakomana wake achibva kumatenga, uyo waakamutsa kubva kuvakafa, Jesu uyo ​​isu anovanunura kubva pakutsamwa kuchauya. "
Uye gare gare 5:9-10 anoti vatendi, "Nokuti Mwari haana kutisarudza kuti tive vokutsamwirwa, asi kuti tigamuchire ruponeso kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu, uyo akatifira kuitira kunyange takasvinura kana tivete tirarame kuti naye. "
Tariro yedu chete ndiye Jesu. Uye anotida zvikuru.
"Urwu ndirwo rudo, kwete kuti isu takada Mwari, asi kuti iye akatida uye akatuma Mwanakomana wake kuti ave rudzikunuro rwezvivi zvedu. " 1 John 4:10
Paiva mukombe, azere nehasha kutsamwa nehasha kuti Mwari akanga akagadzirira kudurura pamusoro pedu. Asi kune vaya vari Kristu, tisingadi kutsungirira kuti hasha. pachinzvimbo, Mwari yaakatorera mukombe kuti kubva pamusoro pemisoro yedu uye Ari chakaita izvozvo. Nokuti avo vedu vari Kristu, Akatora kutsamwa kuti isu zvaani, akadurura zvose mukapu imwe, ndokuisa pamusoro musoro Mwanakomana wake uye iye akadururira zvose paari. Chii rudo rukuru! Jesu akatsungirira ari zvinotyisa hasha dzaMwari vatadzi pamuchinjikwa. Akafa ari pamuchinjikwa, asi Akamuka kubva muguva rake mazuva matatu gare gare saMambo wedu vakakunda. Zvino Jesu akati, "Uyai kwandiri, vose makaneta makaremerwa, uye ini ndichakupai zororo. " (Matthew 11:28)
The Good News ndechokuti vaya vakatenda ichi Jesu- Mwari haana hasha akasiya kwatiri. In Kristu, Mwari haasisiri kutsamwa nesu. Ari ashungurudzwa kwatiri patinotadza, asi isu hatingazvirumbidzi kurangirwa kwavari. Akaropafadzwa munhu ane zvivi asina kuverengwa pamusoro pake.
Uye kana tikaramba kuvimba munaKristu, apo Iye anodzoka tinogona kumugamuchira nemufaro pachinzvimbo kutyisa. Uye tinogona kuimba, "Kunyange zvakadaro zvakanaka mweya wangu."
Evan • Kukadzi 2, 2015 pa 9:41 pm • pindura
Ndatenda, rwendo. Ndaida kuwana zvinokubatai enyu chinhu nokuti makanga munhu akabatanidzwa guru basa kufamba kwangu naKristu. Izvi zvichava refu, saka kana musingadi kuwana famba pairi, Ndinonzwisisa.
Pandakava muKristu ane makore mashomanana shure, Zvinhu zvakanga zviri nyore- kuvimba Jesu zvakakwana, Mwari forives imi zvose (zvekare, chipo, ramangwana), chete naye uye iye achaita vatarisire zororo. Kwete kuti manzwiro hwaro hwokutenda, asi mazuva iwayo kwaiva kugara mufaro uye kuteerera akasvika vokuitirwa nokufunga Ini akakanganwirwa mirawo. Just mbudzana vaivimba baba vake uye haana kunetseka vanoda kuva akakwana. The ainyanya vose chokuonga nokuda kwaKristu. Handina vanofanira kunetseka pamusoro chivi nokuti nzira ndikacherekedza nayo- basa rangu raiva kuvimba naJesu, Mweya Mutsvene akatora vatarisire zororo.
Sezvo Ndakapedza richinyanya nguva shoko, paiva magwaro akwire aizunungusa kuti chivimbo / nyasha hwaro kuti ini zvambotaurwa akatora akandidzosera ndichiri muduku. baba vangu kunyanya (akanga muduku mukutenda panguva, saka handina kuiita pamusoro pake) aikurumidza chaizvo kusimbisa kururamisira kwaMwari pasina vakadengezera nokuripisa kudzidzisa nezvengoni dzake. Semuyenzaniso, akandidzidzisa pane muduku chaizvo kuti ndinofanira kutendeuka zvangu zvose kuti vaponeswe, kuti vaKristu vakawanda kuchava kwenguva vanongozoerekana paZuva Rokutongwa nokuti vanofunga kuti Jesu achaita kuvagamuchira pavanenge vachiri kutyora mutemo waMwari, nezvimwewo. Akanga huru pane kutaura tounges, nezvimwe zvizhinji asi haana yakarohwa zvikuru Mwari kuvimba chikamu.
Sezvo vakawanda kukahadzika yakapinda mukati uye ndakatanga kufarira zvikuru yezvouMwari, kumwe chete mutsetse Ini akatisiyira muenzaniso kuedza kutora zvinhu kupinda simba rangu uye kunzwisisa zvose panze azvakaita pachinzvimbo tichiswedera pedyo uye nokumirira Mwari. Handikwanisi kukutaurira kuti maawa akawanda ndava vakapedza kutsvakurudzwa yezvouMwari zvinhu, seisingapindurwi mibvunzo, Akatarisa magwaro echiGiriki, nezvimwewo. paIndaneti ichi gore rapera. My pfungwa muitiro yave “Zvakanaka kana Jesu ane zvose izvi ezvinhu, ipapo Ndinofanira nechokwadi chokuti ini ndindosangana ezvinhu.” saka, vanofamba wangu akava kunzwisisana uye perfectionistic. Chii chakanga kamwe saka nyore vakava kuoma chose, kwangu chivimbo akanga akaremara, uye nokudaro Ndiri munhu akanaka kuremedzwa nguva kufamba kwangu naKristu vachiri izvozvi.
Ini kuona vaviri rinopikisa kudzikama misasa mukati chiKristu uye ndine chokwadi ungabvuma- 1) chinhu “kuteerera” musasa uye 2) Jesu akabhadhara zvose” musasa. Musasa kuteerera anokurumidza kusimbisa basa redu uye kazhinji RWEZUVA muvhangeri ina dzokutanga, chiratidzo, Testamende yekare, nezvimwewo. Jesu akaripira zvose mumusasa nokunetsa kuvimba naye oga uye zvinoita sokuti kuvimba chaizvo zvikuru Paul. Pandakatanga kufamba naKristu, Zvechokwadi ndakava Mindset pamusoro Camp 2, asi ini zvikuru kudzidza Magwaro uye (makasuwa, zvinofungwa nevanhu paIndaneti) Ndakava akavhunduka kwazvo pamusoro kukahadzika kunzwisisa kwangu zvenyasha kwakachinja upenyu hwangu. Camp 1 mukuru pamusoro pakusimbisa kururama uye asingachinji kwaMwari hunhu asi inoita kuedza kugadzira kuteerera kwedu wenyama. Vacharamba nezve zvinhu sezvinoita “tenzi, tenzi… Handina kumbokuzivai” chinyorwa. Camp 2 mukuru pamusoro pakusimbisa kukanganwirwa naMwari uye chiedza chezuva uye miraraungu zvinhu, asi kunoratidza Mwari sokunge ari maviri vanhu akasiyana zvachose kubva yekare kusvikira NT. Vachataura nezve kuti hapana chingaparadzanisa isu norudo rwaMwari uye kuti mhando zvinhu. chokwadi chaMwari kuva pane imwe nzvimbo iri pakati nepakati pakati, rudyi? Chinangwa changu anongotaurwa kuziva Mwari ndiani zvaanoti ndiye uye vane yemubhaibheri nepakati kunzwisisa zvose unhu hwake. Ndiri kuva chakaomesesa nguva kuwana kudzokera chete kuvimba naye uye zvichirwadziwa ukama naye nekuti ndine dzose kunetseka pamusoro “vasingakwanise zvokufungidzira zvose panze” (Ndiri kuvimba nokunzwisisa kwangu zvakaipisisa). Chinhu bedzi I nyaradzo izvozvi izvi- Kudzokera kudzokera kufamba uye kutaura naMwari uye tichivimba kuti achatora ichi chinhu chero anofanira kutora Ndaingovaudza kuvimba naye kuti aite izvozvo kana. Kana ane zvose izvi ezvinhu, zvino basa rangu kuvimba kuti nyasha dzake achandibatsira navo.
Rudo ruzhinji, rwendo.
Liz • Nyamavhuvhu 10, 2016 pa 8:52 ndiri • pindura
Ndakaona Angst yako, uye imi makarurama. Pane ndezvaJosephus mapoka maviri kana uchitarisa tanidzwa. Pane musaridzwa Zvisinei, uye ndinoziva munogona kuzvigamuchira. Ndinoti vanogamuchira pane kuwana nokuti Ishe anotiudza, “gogodzai uye mukova achasvinudzwa”. Kudzidza Shoko rakanaka, usamire. asi, Uri muna munamato? Handisi kutaura pamusoro kunyengetera ane manzwiro mutoro kana mbatya mazita zvikumbiro. asi, vachinyengetera zvechokwadi zvichibva pamwoyo wako. Ndechimwe chinhu yokuita, Ndanga kudzidza kuzviita nani pachangu manjemanje. Chekutanga, vachirumbidza Mwari nokuti iye ndiye. Zvadaro kumbira ruregerero, chaicho ruregerero. Pashure paizvozvo kuchigaro choushe pamwechete zvinokunetsa, kunetseka uye nemitoro. Kuchiisa icho pamwe yakawanda rumbidzo. Pane dzimwe Apps kukuru ikoko anogona kubatsira iyi (Examen uye ongororai). Vose vari munamato Apps kuti shamwari yangu zvikuru kunoratidza. Handina akasarudza izvo munhu kuita asi. Ndingada pfungwa achiverenga bhuku, zvinoyevedza, kubudikidza Priscilla Shirer. Ndiri kuverenga iye zvino. Zviri nezvomunyengetero uye hondo yezvokunamata uye rave zvikuru! Chaizvoizvo ziso yokutanga. Ndiri kufunga zvakawanda kuti munzanga Western tiri kurara pakunamata. Tine chekanguva nzira yokunyengetera uye hondo yezvokunamata riri rungano – asi ndiko zvose zvechokwadi chaizvo. Uchawana rugare mumunyengetero – kutaura Mwari pamusoro mibvunzo yako. Zviri kunaka kubvunza mibvunzo. Ndinovimba muri kuona ichi uye ndinovimba kunokubatsira Evan!
Hanzvadzi yako muna Kristu,
Jimmy Hayes Jersey • Mbudzi 24, 2015 pa 12:42 pm • pindura
Keenan Allen Jersey • Zvita 12, 2015 pa 12:17 pm • pindura
Pane zvakawanda variances kubva indoor nevolleyball pamwe Outdoor Beach bhora. Chinhu chakaoma kugamuchira richishanda Zvamazvirokwazvo watama foward chaiwoiwo yakapwanyika madota ibwe. A necheseri chidobi kazhinji inongova 3 danho chidobi apo imi kutanga pakarepo pane kuenda mberi sezvo imi kubhururuka.